Guddoomiyaha Urur-siyaasadeedka SSCD oo sheegay inay Dhulbahante ragaadiyeen afar dhibaato oo is-barkan | Berberanews.com
Home WARARKA Guddoomiyaha Urur-siyaasadeedka SSCD oo sheegay inay Dhulbahante ragaadiyeen afar dhibaato oo is-barkan
Guddoomiyaha Urur-siyaasadeedka SSCD oo sheegay inay Dhulbahante ragaadiyeen afar dhibaato oo is-barkan
Hargeysa-(Berberanews)- Guddoomiyaha Urur-siyaasadeedka SSCD Kayse Cabdi Yuusuf, ayaa ka hadlay Shirkii Taleex oo uu si adag u cambaareeyey, isla markaana waxa uu sheegay in Beesha Dhulbahante oo uu dhalasho ahaan ka soo jeedo inay haystaan afar dhibaato oo ay ugu horreeyaan Garaaddada Beeshaasi.
Guddoomiyaha Ku-meel-gaadhka ah ee Urur-siyaasadeedka SSCD, Kayse Cabdi Yuusuf, waxa uu ugu baaqay Dhulbahante inay nabadgelyada iyo midnimada Somaliland ilaaliyaan, isla markaana ay wax la qaysadaan inta kale ee Somaliland. Waxaanu u soo jeediyey inay taageeraan Urur-siyaasadeedka uu isagu horkacayo ee SSCD oo ka mid ah Ururrada siyaasadda ee ka gudbay wejigii koowaad ee Shuruudaha looga baahan yahay Ururrada siyaasadda ee u tartami doona doorashada golayaasha deegaanka Somaliland oo sannadkan gudihiisa la qaban doono sida loo qorsheeyey.
“Haddii aan ka hadlo shirkii Taleex markii hore Urur ahaan waannu soo dhawaynay oo waxa lagala socday Warbaaahinta caalabka oo dhan, sida aanu u soo dhawaynayna waxay ahayd Deegaannadaas waxa ka jiray tabasho iyo kala qaybsanaan Siyaasadeed iyo dib-u-dhac weyn oo u bahaan in wax laga qabto. Dad badan oo Saaka (shalay) halkan jooga way nalaqabeen baahidii halkaas ka jirtay.” Sidaa ayuu yidhi Guddoomiyaha Urur-siyaasadeedka SSCD Kayse Cabdi Yuusuf oo shalay khudbad ka jeediyey fagaaraha Beerta Xorriyadda magaalada Hargeysa oo ay kumannaan qof oo reer Hargeysa ah oo sameeyey bannaan-bax lagu taageerayo qarannimada, madax-bannaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Somaliland, kuwaasoo buux-dhaafiyey fagaaraha Beerta Xorriyadda ee Hargeysa.
Kayse Cabdi Yuusuf oo hadalkiisa sii wataana waxa uu yidhi; “Waxa jira dhawr arrimood oo markiiba keenaayey in riyadaasi iyo sidii aynu doonaynay ay u noqon lahayd, waa midda hore ee shirka Taleex lagu qabtay wuxuu noqday mid jaan fudud oo si deg-deg ah ku soconaya, waa marka labaad ee waxa uu ahaa shir aanay Albaabbadiisu u furnayn dadka magacooda loogu yeedho Beelaha Dhulbahante ee la yidhi; ‘hatashadeen mid ay u dhammaayeen muu ahayn, marka aynu runta ka hadalno dhibaatada ka jirta Goballada Sool iyo Buuhodle waxa weeye mid inta badan ay samaysteen dadka degaankaas ku nool oo ay ku kala qaybsadeen Siyaasadaha oo waad ogtihiin badh waxay tageen Puntland, waxayna sitaan Saxeexa Garaaddada iyo Isimmada oo kii Puntland aadayaaba waxa ugu dhufta shaabbadda Garaaddada Dhuulbahante kuwa Somaliland ka midana waxa siiya iyaga.”
Kayse oo ka hadlaya markii uu ka midka ahaa hoggaanka Ururkii hubaysnaa ee dagaalka kula jiray Somaliland ee SSC, waxa uu yidhi; “Waxa jiray Urur anigu aan ka mid ahaa oo la odhan jiray SSC ,oo ahaa Jabhad, markaa annagu waxaanu la dagallamaynay Somaliland, haddaannu Somaliland la dagaallamaynay macnahayagu wuxuu ahaa in maanta shacabkan i hortaagan aanu indhohooda ku soo jeedinno waxaannu tabanayno, laakiin ma ahayn halla kala gooyo Somaliland.”
Guddoomiyaha Urur-siyaasadeedka SSCD Mr. Kayse, oo ka hadlaya doorka ay Isimmada Dhulbahante ku leeyihiin hirgelinta Ururka SSCD, waxa uu yidhi; “Waxa Ururka SSCD doortay oo saxeexay isla Isimmadaas oo Ragga loo doortay waxay ahaayeen isla Dhuulbahante, kuwa Somaliland loo soo dirayeyna waxay ahaayen Dhulahante, Ninka cid walba Shaabbadda siinayeyna waxa uu ahaa Garaadka. Markaa, Dhulbahante waxa haysta afar dhibaato oo ay ugu horrayso Garaaddadaas oo waxaannu is lahayn intas ayey isugu yeedhayaan oo kii sharci leh iyo kii gardaran halkaas ayaa lagu wadahadlayaa marka la yidhaahdo kii Dhulbahante ee Hargeysa jooga yuu iman shirkan iyo kii Garoowe joogayba iyo kii SSC ma iman karo haddii kii Garaaddadani ay doorteen ma noqonayaa ma iman karaan shirkan, markaa shirka Taleex waxa uu ahaa shir qorshe gaara leh.”
Kayse Cabdi Yuusuf mar uu ka hadlay arrinta arrimaha uu ka soo hadlay ka yaabka badan waxa uu yidhi; “Waxa kale oo ka daran Tuulo yar oo reer kaliya deggan yahay oo reerkii is-dilay oo waxa ku dhintay saddex nin, waxd-garad iyo aqoon-yahan iyo Garaad inta la yimaaddo la yidhaahdo arrintiinna la geli maayo ee taayada wada oo marka annagu idinka tango dhammaysta; waligeed miyaad aragteen? Dee waa is-dila oo dagaalku waxa uu ka kacay kala qaybsananta.”
“Urur-siyaasadeedka SSCD aragtida uu ka qabo shirka Taleex waxa ka soo baxay waxay noqotay mid sii abuuray dhibaato iyo culays hor leh , oo shalay waxa magaalada Laas-caanood ka dhacay muddaharaad oo waa lagu dhintay, waxaana ka masuula iyaga intay Carruurta iyo Dumarka kicinayaan iyagu ha soo horkacaan Nimanka Carruurtoodii geeyay Maraykan ee kuwayaga muddaharadka gelinaaya maaha nin 2 sano dalka ka maqnaa inuu fidmo nagu soo tuuro maaha oo shacabkayaga kiciyo ee waxaan beesha Dhulbahante leeyahay Urur-siyaasadeedka SSCD ku tageera hannaanka Nabadda, maanta waxaynu yeelannay oo naloo oggolaaday Xisbi, markaa waxaan shacka reer Hargeysa ka doonaynaa inaad nagu taageertaan Ururka.”Sidaas ayuu yidhi Guddoomiyaha Urur-siyaasadeedka SSCD Kayse Cabdu Yuusuf.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo buriyey go’aan Wasiirka Maaliyaddu ku kordhiyey Cashuurta Badeecado gaar ah iyo Ganacsato soo dhawaysay
Next articleKhilaaf xooggan oo kala qaybiyey hoggaanka Malleeshiyaadka Al-Shabaab iyo waxa keenay